सर्ट फिल्मको अश्लील तमासा…लक्ष्य पैसा बहाना सचेतना | Hulaki Online
सर्ट फिल्मको अश्लील तमासा…लक्ष्य पैसा बहाना सचेतना
December 4, 2016 .
सर्ट फिल्म कलाको सशक्त विधा हो । तर, नेपालमा थुप्रै गिरोह सर्ट फिल्मलाई अश्लील धन्दाको माध्यम बनाइरहेका छन् । भद्दा, छाडा र सस्ता यौनजन्य विषयवस्तु हुने यस्ता फिल्म युट्युबमा अपलोड गरेर पैसा कमाउन पल्केका उनीहरूलाई कला वा अभिनयसँग मतलब हुने कुरा पनि भएन । यस्ता फिल्ममा काम गर्ने महिलाको श्रम तथा यौन शोषण हुने गरेको छ । सर्ट फिल्मका नाममा नेपालमा कस्ता–कस्ता तमासा भइरहेका छन् त ? किन कसैले नियमन गरिरहेको छैन ? को–को छन् यसमा संलग्न ? अनिल यादवले केस्रा–केस्रा केलाएका छन् ।
फिल्मको नामः पैसा कि बैँसा । दृश्य छ यस्तो– गाउँबाट हिरो बन्ने सपना बोकेर शहर छिरेको एक युवक एउटा कार्यालयभित्र प्रवेश गर्छ । कार्यालयमा बसेकी युवती उसलाई ‘पैसा दिन नसके बैँसा’ दिन आग्रह गर्छे । केटा राजी हुन्छ । अनि, कार्यालयको सोफामै ती युवती र युवक बैँसको प्यास मेट्न थालिहाल्छन् । र, यत्तिकैमा चार मिनेट लामो फिल्म सकिन्छ ।
फिल्मको नामः कलेज बंक । कलेज जाँदै गरेकी आफ्नी प्रेमिकालाई युवक ‘कलेज बंक’ गर्न आग्रह गर्छ । एकछिनको आनाकानीपछि युवती मञ्जुर हुन्छे । युवक उसलाई एकान्त ठाउँको एउटा झाडीमा लिएर जान्छ । त्यसपछि उनीहरू रमाइलो गर्न थाल्छन् । ‘सामाजिक सन्देशका लागि’ भनिएको साढे सात मिनेट लामो यो फिल्म पनि रमाइलो गर्दागर्दै सकिन्छ । ‘इन्जोय नेपाल’ युट्युब च्यानलबाट अपलोड भएको यो फिल्मलाई तीन करोडभन्दा बढी पल्ट हेरिएको छ ।
फिल्मको नामः ‘ड्यामड्याम–४’ । फिल्म छायांकन भइरहेको दृश्य छ यसमा । निर्देशक केटा र केटीलाई सुझाउँदै हुन्छन्, ‘पहिला बहिनी त्यहाँ गएर लड्ने, त्यसपछि हिरोले हिराइनलाई रेप गर्ने सिन हो । त्यसपछि चाहिँ तपाईंहरूको लभ पर्छ क्या । यो अनौठो खालको लभस्टोरी हो क्या ।’ अनि निर्देशक ‘एक्सन’ भन्छ । निर्देशकले भनेझैँ दृश्य सुट हुन्छ । क्यामेराम्यानलाई सिन चित्त बुझ्दैन । ऊ निर्देशकलाई ‘मजा आएन’ भन्छ । त्यसपछि निर्देशक आफैँले ‘मजा’ गरेर देखाउँछ । अनि, युवती ‘भएन’ भन्दै आफैँ निर्देशकमाथि सवार हुन्छे । र, ‘रेप’ गर्ने यसरी हो भन्दै निर्देशकलाई उल्टै सिकाइदिन्छे । ‘कुलेन टीभी’ नामक युट्युब च्यानलबाट अपलोड भएको यो फिल्मलाई युट्युबमा ४ लाख ४१ हजारभन्दा बढी पल्ट हेरिएको छ ।
‘न्यू नेपाली सर्ट फिल्म’ भन्दै भिडियो सेयरिङ वेबसाइट युट्युबमा यतिबेला सयौँको संख्यामा अश्लील दृश्य र संवादमात्र समावेश भएका यस्ता फिल्म छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । ‘सर्ट फिल्म’को नाम दिँदै उनीहरू ‘सफ्ट पोर्न’ नै बनाइरहेका छन् । यस्ता भिडियोमा सिर्जनशीलता र अभिनय शिल्प देखिने कुरा भएन । भद्दा किस र बेड सिन नै यस्ता फिल्मका विशेषता हुन् । यसमा सहमत छन्, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राई । भन्छन्, ‘नेपालमा सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग हुन थालेपछि विभिन्न सर्ट मुभीको नाममा सर्ट पोर्न मुभी जस्ता देखिने भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरिन्छन्, यो त ज्यादती नै भइरहेको छ । यो कुनै कला होइन । यस्ता फिल्मले अश्लीलतालाई मात्र बढावा दिन्छन् । समाजमा विकृति ल्याउने काम गरिरहेका छन् । यहाँ त सर्ट फिल्म जान्रकै बदनाम भइरहेको छ ।’
यता ‘एकादेशमा अन्तर्राष्ट्रिय सर्ट फिल्म फेस्टिभल’का प्रोग्राम डिरेक्टर समेत रहेका सर्ट फिल्म निर्देशक अविनाशविक्रम शाह व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई त्यस्ता फिल्म मन नपर्ने बताउँछन् । ‘हरेक मेकरको फिल्म बनाउनुपछाडि एउटा ‘इन्टेन्सन’ हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसको उद्देश्य भनेकै पैसा कमाउने मात्रै हो । उनीहरूले काम गर्ने पनि त्यसरी नै हो । एकचोटि विदेशमा बस्ने मेरो एउटा साथीले युट्युबमा नेपाली फिल्म भनेर सर्च गर्नासाथ नराम्रो, छाडा फिल्म मात्र भेटियो भनेर मलाई गुनासो ग¥यो । यसो भन्दैमा कसैलाई नबना भन्न त मिल्दैन नि । त्यो उनीहरूको स्वविवेकको कुरा हो ।’
यसरी हुन्छ शोषण
यस्ता ‘सर्ट फिल्म’मा काम गर्ने अधिकांश कलाकार विभिन्न हिसाबले शोषणको शिकार भइरहेको स्वयं कलाकारहरू नै बताउँछन् । ‘नबुझीकन फिल्म खेल्न आउनेहरू यहाँ अश्लील फिल्म खेल्न बाध्य भइरहेका छन्,’ दर्जनजति सर्ट फिल्ममा अभिनय गरेकी मोडल निशा घिमिरे भन्छिन्, ‘यहाँ त सर्ट फिल्मको नाममा नयाँ केटी ल्याएर अनुहार बेच्ने काम जस्तो भयो । युवतीलाई नंग्याएर उनीहरू पैसा कमाइरहेका छन् । यस्तो गरेर कहिलेसम्म टिक्ने हो त ?’ उनले आफूलाई म्युजिक भिडियो भन्दै झुक्याएर सर्ट फिल्म खेलाएको तीतो अनुभवसमेत शुक्रवारसँग साटिन् । ‘डेढ वर्षअघिको कुरा हो । मलाई निर्देशक आरएस बस्नेतले म्युजिक भिडियोमा खेल्नका लागि भनेर पोखरा बोलाए,’ उनले सम्झिइन्, ‘म गएँ । त्यतिबेलासम्म मैले दुइटा म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी थिएँ । सुटिङ अवधिसम्म मलाई उनीहरूले म्युजिक भिडियो नै भनेका थिए । ‘लभ सिन हो, अलि अलि चाहिन्छ’ भन्दै किस सिनहरू दिन लगाए । भिडियो होइन जस्तो लागेर मैले प्रश्न पनि उठाएँ । पछि काठमाडौँमा सम्पादन गर्ने बेलामा मात्र थाहा भयो ‘सर्ट फिल्म’ रहेछ । ‘बलात्कार–३’ नाममा युट्युबमा अपलोड भएको त्यो फिल्म आफैँलाई हेर्न लाज लाग्छ । परिवारबाट धेरै गाली खाएँ । ‘ज्योति मगर र अर्चना पनेरुलाई टक्कर दिने नायिका’ भन्दै युट्युबमा प्रचार पनि गरियो । अहिलेसम्म त्यो फिल्म युट्युबबाट हटाइदिन भनेर संघर्ष गरिरहेकी छु । तर, मान्दै, मान्दैनन् । के गर्ने होला ?’
उनले भोगेको पीडा यतिमै सकिँदैन । कुलेन टीभी च्यानलबाट अपलोड भएको सर्ट फिल्म ‘उत्ताउलो मन’ सुटिङका क्रममा पनि उनले दुव्र्यवहार खेप्नुपरेको बताइन् । ‘निर्देशक अर्जुन थापा अविरलको फिल्म हो यो,’ उनले भनिन्, ‘सुटिङका क्रममा उहाँले मलाई जबर्जस्ती सिनहरू गराएको म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ । ‘अलि तल, अलि तल’ भन्दै छाती धेरै देखाउन लगाउँथे । सुटिङका बेला पनि भल्गर शब्द प्रयोग गर्थे । हाम्रो इज्जतको ख्याल नै नगर्ने । अहिले त ऊ मलाई निर्देशकजस्तो नै लाग्दैन । मबाट अञ्जानमा भएका गल्ती हुन् यी । र, अरु केटीहरूलाई बुझेरमात्र यो क्षेत्रमा काम गर्न सुझाव दिन्छु ।’
‘आवश्यक परे जस्तोसुकै सिन दिन पनि तयार छु’ भन्दै अन्तर्वार्ता दिने अभिनेत्री सपना लामिछानेका पनि थुप्रै सर्ट फिल्महरू युट्युबमा भेट्न सकिन्छ । उनी निकटकाहरू भन्छन्, ‘सर्ट फिल्मका नाममा हुने शोषणका कारण उनले यस्तो फिल्म नखेल्ने निर्णय गरेकी छिन् ।’ शुक्रवारसँग उनले भनिन्, ‘म सर्ट फिल्म पहिला गर्थें, अहिले गर्न छाडिसकेँ । त्यस्ता मुभीबारे मेरो भन्नु केही छैन ।’
शोषण महिला मात्र होइन, पुरुष कलाकारको पनि भइरहेको छ । २ सय ७० भन्दा बढी सर्ट फिल्ममा काम गरिसकेको बताउने अभिनेता आर्यन बोगटी (नवीन) युट्युबमा भिडियोको भ्युअर्स बढाएर पैसा कमाउने लोभमा अरूलाई नंग्याउने मेकरहरू व्याप्त रहेको बताउँछन् । ‘मलाई पनि निर्देशकहरूले जबर्जस्ती र झुक्याएर भल्गर सिनहरू धेरै लिए,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू सम्पादनका क्रममा मिलाउँछु भन्थे तर जस्ताको तस्तै अपलोड गर्थे । त्यही कारण कति त मैले अपलोड नै गर्न दिइनँ । मेरो घर भारतको पञ्जाबमा छ । मेरा पञ्जाबका साथीहरू मलाई ‘तँ नेपालको पोर्न स्टार होस्’ भन्दै जिस्काउँछन् । यस्तो सुन्दा निकै दुःख लाग्छ ।’ यही कारण केही समय सर्ट फिल्मबाट विश्राम लिएका उनी फेरि काम गर्न थालेका छन् । ‘अब त्यस्तो भल्गर खेल्दिन,’ उनले भने ।
यता सयभन्दा बढी सर्ट फिल्म निर्माण गरिसकेको बताउने शंकर अधिकारी ‘घायल’ आफूले अहिलेसम्म कोही कलाकारलाई शोषण नगरेको बताउँछन् । ‘तर, अरूले गरेका होलान्,’ उनी उल्टै प्रश्न गर्छन्, ‘नत्र केटीहरूलाई ‘सर्ट फिल्म खेल्ने हो ?’ भनेर प्रस्ताव राख्नासाथ नाक खुम्च्याउँछन्, किन त ?’
पारिश्रमिकमा पनि शोषण
धेरैको अनुमान हुन्छ– यस्ता फिल्ममा काम गर्ने कलाकारको पारिश्रमिक पनि आकर्षक होला । तर, वास्तविकता ठीक विपरीत छ । ‘नयाँलाई त ब्रेक दिने हो, पैसा त नदिँदा पनि हुन्छ,’ निर्देशक अधिकारी भन्छन्, ‘अवस्था हेरेर दिनको एक हजारदेखि १५ सयसम्म दिइन्छ । र, एकै दिनमा आधा दर्जनजति फिल्मको सुटिङ गरिन्छ ।’ उनले शनिवारमात्र काठमाडौँ, शंखमूल नजिकैको यूएन पार्कमा तीनटा फिल्मको छायांकन गरे ।
देखाउने एउटा दाँत, चपाउने अर्कै
बाहिरबाट देखिँदा अर्कै पेशा गरिरहेका व्यक्तिहरू भित्रभित्रै पैसा कमाउने लोभमा युट्युब च्यानल खोलेर सर्ट मुभीको धन्दामा लागेको पाइएको छ । उदाहरणका लागि पीएनपी मिडिया नामक कम्पनीका सीईओ युवराज खत्रीलाई लिन सकिन्छ । उनी फिल्म सम्पादन पनि गर्छन् । उनले चलाएको पीएनपी मिडिया नामक युट्युब च्यानलमार्फत पहिले थुप्रै भल्गर दृश्य भएका सर्ट फिल्महरू अपलोड हुन्थे । पछि युट्युबले नै ब्लक गरिदिएपछि उनी अहिले लुकीछिपी अर्को च्यानलबाट यो धन्दा चलाइरहेका छन् । उनले चलाएको ‘कुलेन टीभी’ धेरैजसो अश्लील दृश्य भएका सर्ट फिल्म अपलोड गर्ने युट्युब च्यानल हो । हालसम्म आठ सयभन्दा बढी सर्ट मुभी बनाइसकेको दाबी गर्ने निर्देशक घनश्याम तिमल्सिना आफूले थुप्रै मुभी बनाएर उनलाई बेचेको बताउँछन् । निर्देशक शंकर अधिकारी घायलका अनुसार उनी केही समयअघिसम्म आफूले बनाएका सर्ट फिल्म युवराजलाई नै बेच्थे । तर, यस विषयमा कुरा गर्दा युवराज तर्किए । ‘मैले चलाएको हो भन्ने के प्रमाण छ ?’ उनले उल्टै प्रश्न गरे,‘ मेरो पीएनपी मिडिया मात्र हो, अरू होइन । पहिला हामी सर्ट फिल्म किन्थ्यौँ, अहिले किन्दैनौँ । सर्ट फिल्ममा अभिनय चाहिँ गर्छु । पैसा दिन्छन्, त्यही भएर गर्छु । तिर्सना बढाथोकी, अर्चना पनेरुले अश्लील फोटो सार्वजनिक गर्दा चाहिँ गलत नहुने ? अनि, हामीले अभिनय गर्दा चाहिँ कसरी गलत हुने ?’
युवराजका जस्ता विभिन्न कम्पनीहरूले विभिन्न नाममा युट्युब च्यानल खोलेर अश्लील सर्ट फिल्महरू अपलोड गर्ने गरेका छन् । युवराज खत्री नै नाम गरेका अर्का एक्सन फिल्म्सका प्रमुखको सर्ट फिल्म पनि युट्युबमा बग्रेल्ती भेटिन्छन् । ‘अहिले मैले बनाएको पनि छैन, खेलेको पनि छैन,’ दोस्रो युवराज भन्छन्, ‘यहाँ यस्तो फिल्म बनाउने धेरै टोली छन् । भनेर साध्य नै छैन । म पहिला बनाउँथेँ । अभिनय पनि गर्थें । अहिले गर्न छाडिसकेँ ।’
त्यसो त नेपालका ठूलठूला म्युजिक कम्पनीहरूले पनि पैसाको लोभमा यस्ता सर्ट फिल्महरू अपलोड गरिरहेका छन् । ‘हाइलाइट्स नेपाल’ले जीवन थापाले बनाएको ‘लोग्ने मान्छे त हो’, राज बस्नेतको ‘वन किस’ जस्ता सर्ट फिल्म अपलोड गरेको छ । म्युजिक नेपालले ‘फिलिंग्स’ नामका भल्गर दृश्यमात्र समावेश सर्ट फिल्म राखेको छ । बुढासुब्बा डिजिटलले सर्ट फिल्म नै नभने पनि ‘चुसी राख न ल’, ‘बुढीको चाटेछ’ जस्ता दुईअर्थी शीर्षकमा कमेडी भिडियो भन्दै अपलोड गरेको छ ।
अपवादलाई छाड्ने हो भने युट्युबमा सामान्य फिल्म र भिडियोहरूको भ्युज एक करोड पुग्न हम्मेहम्मे पर्छ । तर, यस्ता सर्ट फिल्ममध्ये केहीलाई करोडभन्दा बढी पल्ट हेरिएको पाइएको छ । अधिकांश लाखभन्दा बढी पल्ट त हेरिएकै छन् ।
कसरी गर्छन् आम्दानी ?
यस्ता सर्ट फिल्म अपलोड गर्ने युट्युब च्यानलहरूले अनलाइन विज्ञापन एजेन्सी गुगलबाट विज्ञापन अनुमति लिएका हुन्छन् । उनीहरूका प्रत्येक भिडियोमा गुगलको एड देख्न सकिन्छ । एड क्लिक र भ्युजका आधारमा ती कम्पनीहरूले वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरमार्फत पैसा थाप्ने गरेका छन् । ‘कुन देशबाट कति एड क्लिक भयो भन्ने आधारमा आम्दानी हुन्छ,’ हाल आफ्नै एनएचएस मिडियामार्फत सर्ट फिल्म अपलोड गरिरहेका गीतकार शंकर अधिकारी ‘घायल’ बताउँछन् । उनी ‘सिम्पल सिम्पल कान्छी’ बोलको गीतका गीतकार समेत हुन् । ‘जसले यस्ता सर्ट फिल्महरू धेरै अपलोड गरेको छ, उसको आम्दानी पनि लाखौैँ छ,’ एक सर्ट फिल्म निर्देशकले भने, ‘त्यही भएर त सबै काम छोडेर यतातिर लागेको हो नि । नत्र यस्तो छाडा काम किन गरिरहनुपथ्र्यो र ?’
दर्शक बढाउने ‘टेक्निक’
युट्युबमा यस्ता सर्ट मुभी क्लिक गर्नुभन्दाअघि बाहिर राखिने लाजमर्दो तस्बिर (जसलाई थम्बनेल भनिन्छ) देख्नुभएकै होला । थम्बनेलमा त्यस्तो आकर्षक तस्बिर राख्नु चाहिँ च्यानलवालाहरूको भ्युअर्स बढाउने टेक्निक हो । ‘जति हट थम्बनेल राख्यो त्यति नै दर्शकले भिडियो क्लिक गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ,’ सर्ट फिल्म हालेर च्यानल चलाइरहेका एक जनाले भने । भ्युज बढाउन यस्ता युट्युब च्यानल सञ्चालकहरूले अपनाउने अर्को उपाय भनेको ‘फिल्मको नाम’मा हो । युट्युबमा अहिले सर्ट फिल्मका नाममा भेटिने केही फिल्मका शीर्षकहरू अत्यन्तै भद्दा हुन्छन् । ‘अलिकति आकर्षित नाम नराखे त भ्युअर्स नै बढ्दैन नि,’ निर्देशक घायलको तर्क छ ।
कम बजेट, धेरै आम्दानी
यस्ता सर्ट फिल्महरूको निर्माणमा ठूलो लगानी हुँदैन । फिल्म निर्माणमा पनि सामान्य डीएसएलआर क्यामेरा प्रयोग गरिन्छ । ‘दिनमा त्यही चारपाँच हजारजति खर्च हुन्छ,’ निर्देशक घायल भन्छन्, ‘म एकैदिनमा तीनचार वटासम्म फिल्मको सुटिङ गर्छु , कतिपयले त एक दिनमा १० वटै बनाइदिन्छन् । कम बजेटमा धेरै आम्दानी हुँदा यसरी फिल्म बनाउने क्रम बढेको हो । ’ तर, आफूले अश्लील खालको फिल्म निर्माण नगरेको घायलको दाबी छ । यद्यपि, उनले निर्माण गरेको बेड सिन समावेश भएको ‘गेस्ट हाउस’ युट्युबमा १६ लाखभन्दा बढी पल्ट हेरिएको छ । यता निर्देशक घायल भने आफूले होइन, अरूले सर्ट फिल्मको बदनाम गरिरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सर्ट फिल्मको नाममा ‘सफ्ट पोर्न फिल्म’ नै बनिरहेको सत्य हो, यो क्रम रोकिएन भने नेपाल नै बदनाम हुन्छ । ’
त्यसै गरी, यस्ता सर्ट फिल्मको छायांकनका लागि कतिपयले त कोठा नै भाडामा लिने गरेको स्रोत बताउँछ । युट्युबमा भेटिने सर्ट फिल्ममा पनि कोठा र कार्यालयमा छायांकन भएका दृश्य प्रशस्त भेटिन्छन् । ‘सुनसान ठाउँ खोजेर सुटिङ गरिन्छ,’ एक सर्ट फिल्म निर्देशकले भने, ‘केही साथीहरू त एकैचोटि ५० वटा फिल्म बनाउने लक्ष्य लिएर राजधानी बाहिर जानुहुन्छ र सुटिङ सकेर फर्किनुहुन्छ । त्यसो गर्दा रमाइलो नि हुने, फिल्म पनि बन्ने दुवै हुँदोरहेछ ।’
गिरोह नै सक्रिय
अश्लील सर्ट फिल्म अपलोड गर्ने च्यानलभन्दा बढी यस्ता फिल्म बनाएर बेच्ने समूह सक्रिय रहेको पाइएको छ । अपलोड भएका यस्ता फिल्ममा न त निर्देशकको नाम हुन्छ, न कलाकारको परिचय नै । च्यानल चलाउनेहरूको परिचय पनि खुलेको हुँदैन । ‘च्यानल खोल्न पैसा लाग्दैन क्यारे,’ अहिलेसम्म आठ सयभन्दा बढी सर्ट फिल्म बनाएर बेचिसकेको बताउने निर्देशक घनश्याम तिमल्सिना भन्छन्, ‘एउटै कम्पनीले दुईतीनटासम्म च्यानल खोलेका छन्, नाम जे राख्न पनि युट्युबले अधिकार दिएकै छ क्यारे ।’
भल्गर सर्ट फिल्म अपलोड गर्ने एक युट्युब च्यानलका सञ्चालकले नाम नखोल्ने शर्तमा भने, ‘यसरी फिल्म बनाएर बेच्ने त कति छन् कति । एउटा गिरोह नै सक्रिय छ जसको काम नै यही हो ।’ तर, यसरी बनाएका फिल्म उनीहरू कति रकममा बेच्छन् त ? निर्देशक तिमल्सिना भन्छन्, ‘हामी त श्रमजीवी हौँ, श्रम बेच्छौँ । हाम्रो त भात खाने बाटो यही हो । कतिसम्मको सिन भएको फिल्म किन्ने हो त्यसमा भर पर्छ । एउटा फिल्म त्यही पाँच हजार रुपैयाँ जतिमा किन्छन् । खास कमाउने त हामीभन्दा पनि कम्पनीले हो नि । उनीहरूले त लाखौँे कमाइरहेका छन् नि ।’ निर्देशक तिमिल्सना आफूले सर्ट फिल्म बनाएर थुप्रै कम्पनीलाई बेचेको बताए । ‘कम्पनीको मागअनुसार म काम गर्छु,’ उनले भने, ‘यसरी सर्ट फिल्म बनाएर अपलोड गर्ने ५० वटा जति कम्पनीको नाम म अहिले फररर भन्न सक्छु, यस्ता धेरै कम्पनी छन् खोजेर साध्य छैन् ।’ उनले क–कसलाई बेचेका छन् त ? ‘कुलेन टीभीका युवराज खत्री, इन्जोय नेपालका निरज कँडेल, मिलन फिल्म्सका मिलन श्रेष्ठ, ग्लोबल मेन च्यानलका विमल अधिकारी, रामेश्वर जिरेल लगायतलाई बेचेको छु,’ तिमल्सिनाले भने, ‘हामी त श्रमजीवी हौँ, श्रम गरेर खाने हो ।’ उनले नाम लिएका सबै च्यानलहरूले अश्लील दृश्य र संवाद भएका सर्ट फिल्म अपलोड गरेका छन् । तर, कसैले कसैको परिचय खुलाएका भने छैनन् ।
अधिकांश डान्सबारका कामदार
यस्ता सर्ट फिल्ममा खुलेर अभिनय गर्ने अधिकांश कलाकार चिनिएका अनुहार भने होइनन् । कतिपय च्यानलमा एउटै कलाकार दोहोरिएका छन् भने कतिपयमा फिल्मैपिच्छे नयाँ–नयाँ अनुहार देखिन्छन् । कहाँबाट ल्याइन्छन् त यी कलाकार ? ‘विशेष गरी कलाकारितामा रुचि राख्नेहरू आउँछन्,’ निर्देशक तिमल्सिना भन्छन्, ‘पैसाको लोभमा परेर उनीहरू भल्गर दृश्य दिन पनि तयार हुन्छन् होला । तर, म त सुरुमै सबै कुरा जानकारी गराएर मात्र खेलाउँछु । ’
यता निर्देशक शंकर अधिकारी घायल अधिकांशले डान्सबार र क्याबिन रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने युवतीहरूलाई सर्ट फिल्ममा अभिनय गराइरहेको बताउँछन् । ‘म चाहिँ त्यस्तो गर्दिनँ तर अधिकांशले त्यस्तो गर्छन् भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने, ‘नत्र त कुनै नयाँ केटी कहाँ त्यसरी भल्गर दृश्य दिन तयार हुन्छे र ?’
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राई पनि सर्ट फिल्मको धन्दाबारे अवगत छन् । उनले भने, ‘सुन्नमा आए अनुसार अधिकांश छाडा सर्ट फिल्म मेकर्सले डान्सबार, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, मसाज पार्लरतिर काम गर्ने युवती र युवकलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर ‘सर्ट फिल्म’ भन्दै भद्दा तरिकाले अभिनय गराइरहेका छन् । ’
किन कसैले नियमन गर्दैन ?
सर्ट फिल्मको धन्दाका विषयमा सबै जानकार छन् । युट्युब खोल्नेबित्तिकै सबैको नजरमा त्यस्ता भिडियोहरू परेकै हुनुपर्छ । तर, किन सम्बन्धित निकाय मौन छ ? किन कसैले नियमन गरिरहेको छैन ? ‘मानसिकता नै सानो र खराब भएका व्यक्तिहरूले यस्तो काम गरिरहेका छन्, अरू विधामा असक्षम भएपछि यहाँ लागेको जस्तो देखिएको छ,’ चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राई भन्छन्, ‘हामी चाँडोभन्दा चाँडो यस्ता अवैध गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।’
निर्देशक तिमिल्सना भने सर्ट फिल्मको निर्माण नरोकिनुमा चलचित्र विकास बोर्डलाई दोषी देख्छन् । ‘हो, सर्ट फिल्मको नाममा विकृति आएकै हो, भल्गरतिर गएकै हो, समाजलाई खलल बनाउने किसिमले बनिरहेकै हो,’ उनले भने, ‘तर, चलचित्र विकास बोर्डले खोइ ठोस नीति ल्याएको ? खोइ अवधारणा ? यतिसम्म सिन दिन पाइन्छ भनेर भन्नुप¥यो नि । मभन्दा धेरै छाडा सर्ट फिल्म बनाउने कम्पनीहरू धेरै छन्, खोइ कारबाही गरेको ? मैले त सन्देशमूलक फिल्म पनि बनाएको छु ।’ उनले ठोस मापदण्ड भएको भए आफूहरूले यस्तो फिल्म नबनाउने बताउँछन् । ‘खासमा भन्नुपर्दा भल्गर मात्र चल्छ यहाँ । यथार्थ नै यही हो, अनि के गर्नु त ?’ उनले भने, ‘तर, यदि विकास बोर्डले मापदण्ड राख्या थियो भने यस्तो काम नै गरिदैँनथ्यो । म फेरि पनि भन्छु बोर्डले रोकोस्, सेन्सर गरोस्, त्यसपछि हामी पनि रोक्छौँ । मैले काम नपाएको बेला रोजीरोटीको हिसाबले यस्तो फिल्म बनाए होला तर मेरो पहिचान त यो होइन नि ।’
यता ‘कमला’ नामक सर्ट फिल्म बनाएर भारतको दरभंगा इन्टरनेसनल फेस्टिभलमा तीन विधामा अवार्ड हात पारेका निर्देशक अमितेष शाह यस्ता फिल्मलाई युट्युबाट रोक्न कठिनाइ भए पनि विकास बोर्डले कदम चाले नियन्त्रण हुन सक्ने बताउँछन् ।
सर्ट फिल्म बनाउनुअघि निर्माण इजाजत र सार्वजनिक गर्नुअघि सेन्सर गर्नुपर्ने प्रावधान चलचित्र विकास बोर्डको छ । तर, युट्युबमा अपलोड भएका अश्लील सर्ट फिल्महरू बोर्डमा दर्ता भएका छैनन् । यसैलाई आधार बनाएर बोर्डले ती सर्ट फिल्म मेकरहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ ।
‘यो इन्टरनेट क्राइम हो’
निर्देशक, सर्ट फिल्म
विश्वमै सर्ट फिल्म भनेको प्रतिष्ठित र सम्मानित विधा हो । ठूलठूला अवार्डहरू अस्कर, कान्स, बुसान लगायतले पनि यसलाई राम्रो स्थानमा राखेका छन् । तर, हामीकहाँ युट्युबमार्फत पैसा कमाउने सर्टकट बाटोको रूपमा अश्लील सर्ट फिल्म बनिरहेको पाइएको छ । हो, सर्ट फिल्म भनेको छोटो फिल्म चाहिँ हो । तर, यो कुनै खास मुद्दालाई छलफलका लागि बहसमा छोड्न सक्ने सशक्त माध्यम पनि हो । तर, हामीकहाँ सर्ट फिल्म भन्दै अश्लील फिल्म बनाइरहेकाहरूले जे पाए त्यही गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्न पनि त्यति सजिलो छैन । तर, चलचित्र विकास बोर्डले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । यस्ता फिल्महरू खुलेर भन्दा पनि लुकीछिपी बनिरहेका छन् । यसलाई इन्टरनेट क्राइम पनि भन्न सकिन्छ । कतिपय अनलाइन र ब्लगहरूले भ्युअर्स बढाउनलाई समाचार बनाएर प्रमोट गरिरहेको पनि पाइन्छ । सेक्सलाई कन्टेन्टका रूपमा बेच्न सकिन्छ तर आर्टिस्टिक हिसाबले । यहाँ त सर्ट फिल्मका नाममा ‘भल्गारिटी’ मात्र भयो ।
‘सर्ट फिल्म विधाकै बदनाम’
अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड
सर्ट फिल्न बनाउनुअघि निर्माण इजाजत र पब्लिक गर्नुअघि सेन्सर गर्नुपर्ने प्रावधान चलचित्र विकास बोर्डको छ । किनकि, कुनै पनि चलचित्र बन्नेबित्तिकै त्यसको दर्ता र सेन्सर हुन जरुरी छ, चाहे त्यो एक मिनेटको किन नहोस्, ३० सेकेन्डको नै किन नहोस् । १०–२० सेकेन्डका कमर्सियल विज्ञापनहरूको पनि दर्ता र सेन्सर हुन्छ यहाँ । सुटिङको दौरानमा अप्रिय घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवार को ? त्यसैले हामीले निर्माण इजाजत लिनुपर्छ भन्दै आइरहेका छौँ । अनि, त्यसपछि सेन्सर गरेर मात्र रिलिज गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर, नेपालमा सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग हुन थालेपछि युट्युबमार्फत सर्ट मुभीको धन्दा चलाउन थालिएको पाइएको छ । विभिन्न सर्ट मुभीको नाममा सर्ट पोर्न मुभी जस्तो देखिने भिडियोहरू बन्न थालेका छन् । ज्यादती बढेर गएको छ । जसरी यी फिल्म बनिरहेका छन्, तिनीहरूले अश्लीलतालाई मात्र प्राथमिकता राखेका छन् । न स्तरीय बनेको छ, न कुनै फेस्टिभलमा सहभागी हुन लायक नै । मात्र समाजमा विकृति ल्याउने काम गरिरहेको छ । समग्रमा सर्ट फिल्म जान्रकै बदनाम भइरहेको छ । मानसिकता नै सानो र खराब भएका व्यक्तिहरूले यस्तो काम गरिरहेका छन् । अरू विधामा असक्षम भएपछि यहाँ लागेको जस्तो देखिएको छ । सुन्नमा आए अनुसार उनीहरूले डान्सबार, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, मसाज पार्लरतिर काम गर्ने युवती र युवकहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर ‘सर्ट फिल्म’ भन्दै भद्दा तरिकाले अभिनय गराइरहेका छन् । मेरो जानकारीमा भएअनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको अवस्था छ । र, यस्ता साइबर क्राइमलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बृहत् छलफल भइरहेको छ । चलचित्र विकास बोर्डले यसका लागि मन्त्रालयलाई जोड दिइरहेको छ । दर्ताबिनै यस्ता फिल्म बनिरहेका छन् । दर्ता र सेन्सरबिना यस्ता फिल्म अपलोड हुन नदिन अब बोर्डले चलचित्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण संघसंस्थासँग छलफल गरेर एउटा नीति बनाउँछ । यस्ता अश्लील फिल्म बनाइरहेकाहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्छौँ ।
निशा घिमिरे, अभिनेत्री– ‘सुटिङका क्रममा मलाई जबर्जस्ती सिनहरू गराएको म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ । ‘अलि तल, अलि तल’ भन्दै छाती धेरै देखाउन लगाउँथे । सुटिङका बेला पनि भल्गर शब्द प्रयोग गर्थे । हाम्रो इज्जतको ख्याल नै नगर्ने । म अरु केटीहरूलाई बुझेरमात्र यो क्षेत्रमा काम गर्न सुझाव दिन्छु ।’
आर्यन बोगटी, अभिनेता– ‘मलाई पनि निर्देशकहरूले जबर्जस्ती र झुक्याएर भल्गर सिनहरू धेरै लिए । उनीहरू सम्पादनका क्रममा मिलाउँछु भन्थे तर जस्ताको तस्तै अपलोड गर्थे । कति त मैले अपलोड नै गर्न दिइनँ मेरा पञ्जाबका साथीहरू मलाई ‘तँ नेपालको पोर्न स्टार होस्’ भन्दै जिस्काउँछन् । ’
युवराज खत्री, पिएनपी मिडिया– ‘पैसा दिन्छन्, त्यही भएर अभिनय गर्छु । तिर्सना बढाथोकी, अर्चना पनेरुले अश्लील फोटो सार्वजनिक गर्दा चाहिँ गलत नहुने ? अनि, हामीले अभिनय गर्दा चाहिँ कसरी गलत हुने ?’
युवराज खत्री, एक्सन फिल्म्स– ‘यहाँ यस्तो फिल्म बनाउने धेरै टोली छन् । भनेर साध्य नै छैन । म पहिला बनाउँथेँ । अभिनय पनि गर्थें । अहिले गर्न छाडिसकेँ ।’
शंकर अधिकारी ‘घायल’, सर्ट फिल्म निर्देशक – ‘म एकैदिनमा तीनचार वटासम्म फिल्मको सुटिङ गर्छु , कतिपयले त एक दिनमा १० वटै बनाइदिन्छन् । कम बजेटमा धेरै आम्दानी हुँदा यसरी फिल्म बनाउने क्रम बढेको हो ।’
घनश्याम तिमल्सिना, सर्ट फिल्म निर्देशक – ‘यदि विकास बोर्डले मापदण्ड राख्या थियो भने यस्तो काम नै गरिदैँनथ्यो । म फेरि पनि भन्छु बोर्डले रोकोस्, सेन्सर गरोस्, त्यसपछि हामी पनि रोक्छौँ । मैले काम नपाएको बेला रोजीरोटीको हिसाबले यस्तो फिल्म बनाए होला तर मेरो पहिचान त यो होइन नि ।’